Pejy manokana momba ilay fanoheran’ny Birmana 2007 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2007 7:21 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, বাংলা, Español, English
Tsy dia mahazatra loatra izany hoe ny mpibilaogy no loharano fototra tamin’ny fitantaram-baovao. Ny fihetsiketsehana farany tany Myanmar iny dia tsy ho nahoraka loatra raha tsy teo ireo olona maromaro na tao anatiny na tany ivelan’ny firenena nanao vivery ny ainy mihitsy hanapariaka ny vaovao, ny saripika ary ny rakitsarimiaina tamin’ny alalan’ny aterineto.
Nanjary nanana ny tantarany momba ny zony mihitsy aza ireo mpibilaogy Birmana ireo raha nahasarika ny lohatenin’ny gazety malaza eran-tany, ary nampahoraka ny vaovao nanakatsoan’ny fitondrana jadona ny aterineto hanampenam-bava azy ireo. Teo amin’ny faratampon’ny fihetsiketsehana kosa dia namoaka vaovao isan’andro mihitsy ny tonia Preetam Rai, nametraka ny rohy ary nandika teny hanampiana ireo mpanoratra Birmana namantsika. Nangoninay ireny lahatsoratra rehetra ireny ka napetrakay ho amina pejy manokana. Tafiditra ao avokoa ny lahatsoratra momba ireo mpiblaogy Birmana any amin’ny gazety malaza ary manaraka ihany koa ny haino aman-jerin’ny olompirenena manohana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Araka izay nosoratan’ny teknisian’ny bilaogin’ny MSNBC, Will Fernia nanao hoe:
Raha amin’ny vaovao iraisam-pirenena dia ny Global Voices no tokony hojerenao voalohany, tsy noho ny vaovao avoakany ihany fa noho ny rohy apetrany sy ny fandikanteny ao anatiny koa. Izay no tsara kokoa noho ny mitsatotsatoka any amin’ny blaogy isan-karazany any raha te-hahita ny votoatim-baovao mafonja ianao.